July 2016 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
-စာကိုမကျက်ပါနဲ့သား . စာကိုနားလည်အောင် ဖတ်ပါ။ မှတ်ပါ။
-လိုချင်တာတွေကို မဝယ်ပဲ ပိုက်ဆံကို ခြစ်ကုပ်စုပီး ကပ်စေးမနဲပါနဲ့သား . ဒါပေမဲ့ အသုံးနဲ့ အဖြုန်းက်ို ခွဲခြားတတ်ပါစေ။
-ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေ အတင်းအဖျင်းတွေကို ဂရုမစိုက်ပါနဲ့သား . သားအကြောင်းကို သားကိုယ်တိုင်ထက်ပိုပီး ဘယ်သူမှ မသိနိုင်ပါ။
-စာများများဖတ်ပါ သား .reader ကောင်းတစ်ယောက်ပာာ leader ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာပါ။
ရဲ ဝဏ္ဏ သန်း
COC game ဆော့နေတာလား
Candy crush game ဆော့နေတာလား
ယင်းသို့ ဗုဒ္ဓဘာသာမှ ခွဲထွက်လာသော ထိုလမ်းနှစ်သွယ်ကို ရေးသား သုံးသပ်ရန်မှာ အင်မတန် ခက်ခဲလှသည်။ အကြောင်းမှာ - တစ်ဖက်စောင်းနှင်း ဖော်ပြမိလျှင် မိမိဘာသာ သာ အမှန်၊ အခြားဘာသာမှားယွင်းသည်ဟု မှားမှားယွင်းယွင်း သိမြင်စေသော အတ္တဝါဒီ သမား ဖြစ်နိုင်ခြင်း၊ ကွဲလွဲမှုများဖော်ပြရာ စာဖတ်သူတို့အား အမြင်လွဲမှား မှုများဖြစ်ပေါ်စေခဲ့လျှင် သံဃာသင်းခွဲသည်ဟူသော ကံကြီးတစ်ခုပါ ထိုက်ချေအုံးမည်။
English Speaking Basics (30) အင်္ဂလ်ိပ်စကားပြော အခြေခံများ (၃၀)
အသေးစိတ် တိတိကျကျ မပြောနိုင်တဲ့ အမှားတစ်ခု ရှိတာကို သိနေတဲ့အခါ ၊ အမှားရှိတယ်လို့တော့ သိတယ် ဘာမှားနေတာလဲတော့ မသိဘူး ၊ အဲလိုအခါမျိုးမှာ “အမှားတစ်စုံတစ်ခုတော့ ရှိနေတယ်” လို့ ပြောတတ်ကြတယ် မဟုတ်လား အဲဒါကိုပြောဖို့ ဒီပုံစံလေးကို သုံးလိုက်ပါ .
1. There is something wrong with my mobile phone.
ကျနော့် လက်ကိုင်ဖုန်းမှာ အမှားတစ်စုံတစ်ခုတော့ ရှိနေတယ်
ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာမှန်သမျှ အစုံလင်ဆုံး စာအုပ်တစ်အုပ်ပါခဗျာ
ဝိပဿနာကဘယ်လို သမထဘယ်လို ဘာဝနာက ဘယ်လို ကမ္မဋ္ဌန်းကဘယ်လို
အခြေခံကျင့်ကြံပွါးများနည်းကစ ပြီး အဆင့်ဆင့် ရှင်းပြပေးထားပါသေးတယ်
မနေ့က မထင်မှတ်ဘဲ ဟောင်ကောင်နာမည်ကြီးမင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခု အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်မိတယ်။ ဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ မင်းသမီးနဲ့ သူ့အမျိုးသား ဟိုတယ်အခန်းတစ်ခုမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ဗီဒီယိုဖြစ်နေတယ်။ လေယာဉ်နောက်ကျလို့ နှစ်ယောက်သား ဟိုတယ်အခန်းထဲမှာနေပြီး အဆိုပွဲတစ်ခု သူတို့ကျင်းပလိုက်ကြတာပါ။
တခါတုန်းက လူတစ်ယောက်မှာ အလွန်အပြေးသန်တဲ့ မြင်းတစ်ကောင် ရှိတယ်တဲ့…။ အဲ့ဒိမြင်းကို လိုချင်တဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ဦးလည်းရှိတယ်ပေါ့…။
သူဌေးကြီးဟာ မြင်းပိုင်ရှင်ဆီက ဝယ်ဖို့ အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားပေမယ့် မြင်းပိုင်ရှင်ကတော့ သူ့အချစ်တော်မြင်းဖြစ်လို့ ဘယ်လောက်ပေးပေး မရောင်းနိုင်ပါဘူးလို့သာအကြောင်းပြန်ခဲ့တယ်တဲ့…။
ဒီလိုနဲ့ တနေ့မှာတော့ မြင်းပိုင်ရှင်ဟာ သူ့မြင်းကို ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်လေး စီးလာတုန်း လမ်းကြားတခုအရောက်မှာ လူတစ်ယောက် လဲနေတာတွေ့လိုက်လို့ မြင်းဇတ်ကြိုးဆွဲပြီး ရပ်လိုက်တယ်။
နောက် မြင်းပေါ်ကဆင်း၊ လဲကျနေတဲ့ လူအနားသွားပြီး "မိတ်ဆွေ ကျွန်တော် ဘာအကူအညီပေးရမလဲ " လို့ မေးလိုက်တယ်။
အောက်ပါလက္ခဏာများ သင်မှာ ရှိနေပြီလား။ ကိုယ် အသက်ကြီးလာပြီလား ဆိုတာ စစ်ဆေးကြည့်ရအောင်….
၁။ ဘာမဆို တိုးတိုးတိတ်တိတ် လုပ်ချင်လာတယ်။ တစ်ယောက်ထဲ နေတာကို ကြိုက်နှစ်သက်လာတယ်။ တစ်ယောက်တည်း မဂ္ဂဇင်း ပဲထိုင်ဖတ်နေရနေရ ကျေနပ်တယ်။ ဆူဆူညံညံ မကြိုက်ချင်တော့ဘူး။
၂။ အရင်တုန်းက ညလုံးပေါက် KTV ဆိုတာ နောက်တစ်နေ့ ဘာမှ မဖြစ်သလိုပဲ။ အခုဆို နည်းနည်းလေး အိပ်မပျော်လိုက်တာနဲ့ တော်တော်နဲ့ နလန်မထူချင်သလိုပဲ။
ကိုယ့်ကို စိတ်ညစ် အောင်လုပ်တာလည်း
ကိုယ် ကို ပျော်ရွှင်အောင် လုပ်ပေး နိုင်တာလည်း
ကိုယ့် ကို အောင်မြင်အောင် လုပ်နေတာလည်း
ကိုယ့် ကို ကျရှုံးအောင် ပြန်လုပ်တာလည်း
"အဓိက" က ကိုယ့်ရဲ့ "စိတ်" ပါပဲ
မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏ သာသနာ
ကွဲပြား လိမ့်မယ်" ဟု ဟောတော်မူထားခဲ့ပါတယ်။
အရူးအမူး ခံစားပြတာလောက်ကို ချစ်လှပီလို့မထင်နဲ့ ညီမငယ်။
ယူပီးရင် ခံစားချက်မဲ့သွားသူတွေ ဒုနဲ့ဒေး။
ရေသန့်ဗူးဖောက် ကိုယ့်အိတ်လေးဆွဲပေးရုံကို သာယာမနေနဲ့ ညီမငယ်။
ယူပီးရင် ခိုင်းရင်တောင်မလုပ် မသိချင်ယောင်ဆောင်နေတာတွေ ဒုနဲ့ဒေး။
Surprise တွေ ခနခနလုပ်ပေးလို့ စွဲလန်းမနေနဲ့ ညီမငယ်။
ယူပီးရင် Anniversary တောင် သတိမရတော့တာဒုနဲ့ဒေး။
လက်ဆောင်တွေ ခနခနပေးနေလို့ ပျော်နေတာလား ညီမငယ်။
1. go နဲ့ visit အဓိပ္ပါယ်တူ ၊ သွားတွေ့တယ်လို့ စိတ်မှာယူ၊
2. to ဆိုတာကို မထည့်ရ ၊ visit နောက် မှာဗျ ၊
3. Visit နောက်က to ထည့်တာ ၊ Noun ရဲ့သဘော သုံးရင်သာ၊
4. ဟောဒီ မှာ ကြည့်ပါလား ၊ A visit to the pagoda.
1. go နဲ့ visit ၏ အဓိပ္ပါယ် မှာ သွားတွေ့တယ် ဖြစ်သည်၊
visit ၏ နောက် တွင် to ကိုမထည့်ရပါ ၊go နောက်တွင် to ထည့်၍ရသည်။
မြတ်စွာဘုရားသည် သာဝတ္ထိပြည်၊ ဇေတဝန်ကျောင်း၌ သီတင်းသုံး
နေတော်မူ၏။ ထိုအခါ တောဒေယျ ပုဏ္ဏား၏သား သုဘလုလင်သည် သင့်လျော်ရာ၌ထိုင်ကာ မြတ်စွာဘုရားအား ဤသို့လျှောက် ထား၏။
(၁) အသက်တိုခြင်း၊ အသက်ရှည်ခြင်း၊
(၂) အနာရောဂါများခြင်း၊ အနာရောဂါကင်းခြင်း၊
၁၉၈၅ -၈၆ မှာ ကျနော် စင်္ကာပူ မှ ၁၀ တန်း GCE O level အပြီး မှာ ရန်ကုန်တွင် တက္ကသိုလ် တက်နေကြပြီဖြစ်တဲ့
ကျနော့်ငယ် သူငယ်ချင်း ဂျင်ပိ (Lazy Club) ဆီ ခဏပြန်လာခဲ့ ပြီး။
ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများကြား....RC-2 ခေါ် ဒေ သကော လိပ် အမှတ် (၂) လှိုင် နယ်မြေတွင်
အတူ ၀င် စီးမျော ရင်း...ပျော်ရွှင်စရာနေ့ ရက် ကလေးများနှင့် လူငယ်ဘ၀တစ်ခုရှိခဲ့ဘူးပါသည်။
English Speaking Basics (23) အင်္ဂလိပ်စကားပြော အခြေခံများ (၂၃)
ဒီနေ့စကားပြော သင်ခန်းစာလေးထဲက စကားလုံးတွဲဟာ လွယ်လွယ်လေးပေမယ့်လို့ ဘယ်လိုဘာသာပြန်သလဲ ဆိုတာ မဖတ်ဖူးသေးလျှင် နားလည်ရတာ အနည်းငယ် ဂွတီးဂွကျ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် သိပြီးသွားတဲ့ နောက်မှာတော့ တော်တော်လေး လွယ်ပြီး တော်တော်လေးရှယ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိစေချင်ပါတယ်
What ဆိုတော့.. “ဘာလဲ”.. ပေါ့ ၊ if က.. “လျှင်”.. ဆိုတော့ နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာ what if = လျှင်ဘာလဲ .. လို့ ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော ။ တကယ်တော့ အဲဒီအတိုင်းဆို.. ဆိုလိုရင်းအချက်နဲ့ နည်းနည်း လွဲနေပါသေးတယ် ..
ပထမတင်ထားတဲ့ပိုစ့်က ဘာဖြစ်မှန်းမသိ ဝင်မရတော့လို့ ထပ်တင်ပေးတာပါခဗျ
ကိုယ်ပိုင်လင့်မဟုတ်သော အခြားလင့်များကို ချန်ပြီးတင်မှ တင်လို့ရပါတော့တယ်ခဗျ။
ဂျူးလူမျိုးတွေက စာအလွန်ဖတ်သူတွေဖြစ်တယ်။ အစ္စရေးနိုင်ငံမှာ ၁၄နှစ်အထက်လူတွေ ပျှမ်းမျှတစ်လမှာတစ်အုပ် စာဖတ်ကြတယ်။
အစ္စရေးမှာ လူတိုင်းနီးနီး စာကြည့်တိုက်ကတ်ရှိကြတယ်။ ကလေးတွေ နားလည်တတ်စအရွယ်မှာ မိခင်တိုင်းလိုလိုက ကလေးတွေကို စာဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းတတ်ကြတယ်။ စာအုပ်ထဲမှာ အသိဉာဏ်ပညာသိုဝှက်ထားကြောင်း၊ ကျောက်သံပတ္တမြားတွေထက် တန်ဖိုးကြီးကြောင်း၊ အဲဒီအသိဉာဏ်ပညာတွေ သူတစ်ပါးမခိုးနိုင်ကြောင်း လမ်းညွှန်ပြကြတယ်။
အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါ Facebook ပေါ်မှာ အချိန်ကုန်နေတာထက်
အခြား ဗဟုသုတ ရနိုးနိုး ဝဘ်ဆိုဒ်လေးတွေဆီ သွားနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
အကောင်းဆုံး ဝဘ်ဆိုဒ် ၁၀၀ စာရင်းကို တစ်ဆင့် ပြန်လည် မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
၂။ ဆရာ မင်္ဂလာပါရှင်။ သမီးအခု Thyrotoxicosis ဖြစ်နေလို့ ဆေးသောက်နေရပါတယ်ရှင့်။ အဲဒါနဲ့ပက်သက်ပြီး နားလည်အောင်ရှင်းပြပေးစေလိုပါတယ်။ အစားအသောက်နဲ့ပက်သက်ပြီးလည်း ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်လေး ပြောပြ ပေးစေလိုပါတယ်ရှင့်။ အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်ရတာသေချာနားမလည်လို့ပါ။ ဆရာ့ကို ဆေးစစ်ထားတာလည်း ပို့ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင့်။ သမီးအီးမေးလ်နဲ့ အဖြေလေးဖတ်ပြပေးပါရှင့်။